Herin’ny andro masina… | NewsMada
Herin’ny andro masina…
Nanomboka, omaly, tamin’ny sampandrofia na sampankazo ny herinandro masina: niakaran’i Kristy tao Jerosalema, nisehoany amin’ny maha Mpanjaka azy. Mialoha ny lalan’ny hazofijaliana io ho amin’ny tena famonjena: fanafahana ny zanak’olombelona izay mino Azy ho Tompo sy Mpamonjy amin’ny fahotana.
Mitondra inona amin’ny ankehitriny izay? Finoana io, fanantenana, fitiavana. Niseho amin’ny maha Mpanjaka azy i Kristy, tsy nitaingina soavaly, ohatra, fa zana-boriky. Tsy avy amin’izao tontolo izao Izy; tsy mpanjakan’izao tontolo izao, na nisy aza ny fikasan’ny sasany haka Azy an-keriny hatao mpanjaka.
Hafa ny ety amin’izao tontolo izao: iadiana tsy ahalalana maty sy velona ny toerana sy voninahitra toy izany. Mby aiza, ohatra, ny fanetren-tena? Na izay miara-dalana amin’izany hoe eo anatrehan’ny vahoaka mandrakariva, mahay mampahery azy, mitantana azy, manala azy amin’ny sarotra, mampifaly azy…
Mbola tsy hita be ihany na tsy mipaka any amin’ny vahoaka ifotony izay fampanjakana ny fandriampahalemana, ny fanalefahana ny fidangan’ny vidim-piainana, ny fanafoanana ny fisian’ny tsimatimanota, ny ady amin’ny kolikoly, ny raharaham-pirenena hoe tsy ananan-kavana… Famonoana afo no be?
Mandeha ny fotoana ary misy eny ho eny hatrany ny vanim-potoana fisaintsainana, fakana bahana, fanombanana ny dingana vita, fanoritana ny lalan-kodiavina fa tsy fanaovana kitsapatsapa na fahoany fahoany lava… Mby aiza ny tena fihatsaran’ny toe-draharaha? Mitsara tena ny tsirairay, tsarain’ny zava-misy koa.
Mitondra ho amin’ny famonjena sy fitsanganan’ny firenena amin’ny fahavoazany ve izao lalan’ny fijaliam-bahoaka izao, ohatra? Na mbola misy ihany ny finoana sy fanantenana ny ho avy amin’ny fitiavana sy fifampitokisana ny ankehitriny… Fisaintsainana na herin’ny andro masina ny toy izany amin’izao herinandro masina izao.
Eo amin’ny sampan’ny rofy na karazan’aretina sy loza izao ny vahoaka, na eo amin’ny sampan’ny azo inoana ho tanteraka na tsia: ho aiza na hanao inona, raha tsy mby amin’izay iandrasany azy ny mpitondra sy ny mpitantana?